Umasipala uthi baziphathe kahle ababhikisi. | News24
Umasipala uthi baziphathe kahle ababhikisi.
UMASIPALA wasEzinqoleni uthi uthanda ukuncoma ababhikishi abebe lethe izikhalazo zabo ngezinkinga ababhekene nazo kuWard5. Lokhu kulandela isenzo sabomphakathi NgoLwesihlanu bebhikisha ngokuthula besuka eRidge,eMaguntiya beya ehholo lomphakathi laseMlozane.
Okhulumela uMasipala uMnuz Mandla Mabece uthe njengo masipala bazizwile izikhalo zabo.
Uthe bayabonga nokuthi ababhikishi baziphathe ngendla kwangalimazwa sakhiwo, futhi kwangalimala muntu.
“Ababhikisi bakuWard 5 bakhale ngokuthi ikhansela lendawo elikhethiwe alikhethwangwa ngendlela eyiyona kanti futhi bayakugxeka ukuthi alizwani neNkosi yendawo. baphinde bathi encwadini yabo yezikhalazo ikhansela linezihlobo ezingabasebenzi bakwamasipala kanti futhi lokho abakuvumeli,” kusho uMbece.
UMnz Mabece uthe konke lokhu kuzwakele kanti futhi nedlela umphakathi oziphathengawo ukhombisile ukuthi imashi yawo ibihlelekile. Uthe odabeni lokulungiswa kwezikhalazo zabo kuzobhekelelwa umasekufika isikhathi sokuhambisa izicelo zeIDP.
Uthe ezinye zezikhalazo ziqondene noMnyango wezoKuthutha, Umasipala woGu nezinye ke ebeziqondene noMasipala wasEzinqoleni.
Ukugcizelele kakhulu ukuthi njengo mkhandlu ibachazile indlela ababhikishi abaziphathe ngayo.
“Impela uMasipala wasEzinqoleni muncinyane kanti umphakathi ukhombisile ukuthi abantu abancane abanalo udlame, banomcabango ohluzekile, futhi bayakwazi ukusebenzisana nabomthetho,” kusho uMnz Mabece.